1 Каразана №1: Генератор на цветни палитри
1.1 Генератор на палитра
1.4 Други алтернативи
2 Sokajy # 3: Генератор на екрана на уебсайтове
2.3 Заснемане на пълна страница
3 Sokajy # 5: Генератор на уеб фонове
3.2 Дзен БГ
3.5 Текстури 4 Photoshop
3.6 GR Sites Бутон генератор
4 Sokajy # 8: Форма за генериране
4.1 Форма Logix
4.2 PHP Форма
Каразана №1: Генератор на цветни палитри
Функции / Детайли:
Mba hamoronana палитри miloko miorina eo amin’ny sary.
Omeo ireo mpampiasa mba hampitahana, hamerenana, ary hifantina ny lokon-tarimihetsika milamina.
Adobe Color dia fampiharana miorina amin’ny rahona hamolavolana lohahevitra amin’ny alalan’ny iPhone на навигатор. Ny fitaovana dia manampy ny fanangonana loko avy amin’ny sary sokitra, zaridaina, na aiza na aiza misy anao ary mamorona ny volonao manokana. Azonao atao koa ny manaisotra ny loko amin’ny sary ary mampifanaraka ireo lohahevitra ireo ao amin’ny Adobe Illustrator CC.
Ny fitaovana loko hafa tsy dia tsara loatra dia Color Hunter, Color Lovers, CSS Drive Colette Palette Generator, ary koa Colllor. Mariho fa na dia miasa bebe kokoa aza ireo fitaovana ireo (mamorona palette miloko miorina amin’ny sary fampidiran-tsary) fa ny auto-generic ny code couleur dia mety hafa noho ny fahasamihafana amin’ny algoritam fampirimana loko. Manoro hevitra anao aho mba hanandrana ny tsirairay, fara fahakeliny.
Sokajy # 3: Генератор на екрана на уебсайтове
Izaho manokana dia mahita Свиване в мрежата no fitaovana fakana sary an-tserasera farany. Izy io dia haingana, Avo lenta, mora ampiasaina amin’ny mpampiasa, ary tena zava-dehibe fa mamorona sary tsy misy dikanteny amin’ny rano.
Заснемане на пълна страница
Am-respovable ve aho dia tsy mpamokatra fakana sary? Na izany aza, fitaovana iray tsy tokony ho lanonana izany – Manara-maso ny fandraisana andraikitra amin’ny tranokala rehetra miaraka amin’ny kitay tokana. Fotoam-panam-potoana lehibe ho an’ireo izay mamolavola lohahevitra mamaly izany.
Алтернативи: Favicomatic, Gen Favicon, Favicon Generator, InMotion Favicon Generator, ary koa Faviconr.
Sokajy # 5: Генератор на уеб фонове
Tartan Maker – стилове Сари ао amin’ny тартан
Colorzilla – CSS кодове на Mamolavola dingana miandalana ao amin’ny.
Текстури 4 Photoshop
Текстури 4 Photoshop dia mamorona lahatsoratra amin’ny endritsoratra manokana.
GR Sites Бутон генератор
GR сайтове – mamorona bokotra amin’ny endri-tsoratra sy ny loko.
Алтернативи: Обичам IMG, DIY LOL, Manaova Meme ary IMG Flip.
Sokajy # 8: Форма за генериране
Форма Logix – Famoronana rindrambaiko tsotra tsotra-n-paste – WYSIWYG rediredy misy.
PHP Форма – Mamorona endrika HTML ao amin’ny 3 лесни стъпки, ци мила соня.
Ity ny lisitry ny 70 tànana voafidy، mora ampiasaina، ary ny mpamatsy aterineto maimaim-poana
Bu lisitry ny 70 tanrı voafidy, mora ampiasaina, ary ny mpamatsy aterineto maimaim-poana izay
Ето списък от 70 подбрани, лесни за използване и безплатни уеб генератори, които ще
Das Wer, Was, Wo, Wann und Warum des exzellenten Blogschreibens